UGAAR AH HAWEENKA: 6 Sifo Oo Lagu Garto Ninka Niyadda Kaa Jabin Doono | Aayaha
UGAAR AH HAWEENKA: 6 Sifo Oo Lagu Garto Ninka Niyadda Kaa Jabin Doono
Haddii aad tilmaamahan ku aragtid xiriirkaaga, taxadar maxaa yeelay waxaa jirta fursad wanaagsan uu ninkaas kugu niyad jabin karo.
Waa kuwaan 6 sifo oo lagu garto ninka ku niyad jabin doona.
Aad ayuu kaaga mashquulaa
Ninka sida dhabta ah kuu jecel gabaryahay ama islaanyahay xittaa haddii uu mashquulkiisa badanyahay waqti ayuu kula qaataa, balse ninka mar walba kaa mashquula oo aanan waqti ku siinin, waxay ubadantahay inuu ku niyad jabin doono.
Kuuma muujiyo inaad saaxiibtiis tahay, mana kuugu yeereeyo ereyada qiimaha leh sida mcnto ama gacaliso
Ninka sida dhabta ah kuu jecel wuxuu dadka tusaa sida aad ugu weyntahay iyo farxadda uu ku qabo inaad xaaskiisa ama saaxiibtiis tahay haddii uusan kuugu yeerin saaxiibtiis ama xaaskiisa, kadib ma tihid qof dhab uu ujecelyahay, waxaadna ka fileysaa wax halis ah ninka aanan ku faraxsaneyn inaad xaas u noqotay, kana filo niyad jab.
Waxaa tahay qofka Kaliyah ee isku daya inuu xiriirka shaqeeyo
Si, xiriirka uu unoqdo mid guuleysta, labada dhinac waa inay ka shaqeeyaan, haddii aad tahay qofka kaliya ee dadaal walbo ku bixiya inuu xiriirka wanaagsanaado dabadeed, waxaa marti galin doontaa niyad jab.
Taleefankiisa ayuu kaa qarsadaa
Haddii mar kasta uu mashquul kuyahay telkiisa isla markaana uu kaa ilaaliyo, waxaa jirto fursad ah inaad niyad jab la kulmi doontid, ninka sida dhabta ah kuu jecel marnaba wax kaama qarsanaayo xittaa taleefankiisa.
Been ayaad ku qabatay hal mar kabadan
Waxaa jirta fursad ah inuu ku niyad jabin doono haddii aad ku qabatay been mar kabadan, nin been kuu sheega laguma aamini karo qalbigaaga.
Iskuma kaa fur furaayo
Haddii aad bilo shukaansatay isla markaana uusan isku kaa fur furin wali, waxaad halis ugu jirtaa soo dhaweynta niyad jab, nin daacad ah wuu isku kaa fur furaa waxna kaama qarsanaayo.